Xildhibaano Ka tirsan Hirshabeelle oo sheegay in ay xalin waayeen khilaafka siyaasadeed ee ka jira G/Hiiraan – Kalfadhi
Xildhibaano Ka tirsan Hirshabeelle oo sheegay in ay xalin waayeen khilaafka siyaasadeed ee ka jira G/Hiiraan
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshaeelle oo muddooyinkii la soo dhaafay dedaalo dhex dhexaadin ah ka waday magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan ayaa sheegay in aysan waxba ka galin xalinta Khilaaf Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee Gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Xildhibaanadaan oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in ay waqti dheer geliyeen islamarkaana aysan jirin ilaa hada wax u qabsoomay iyagoo baaq u diray Dowladda Federaalka Soomaaliya si ay u soo farageliso Xiisadda Gobalka.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in muddo 20 maalmin ah oo ay ku sugnaayeen Beladweyne ay ku guul dareesteen sidii ay u xalin lahaayeen Khilaafka ka taagan magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan.
“Waxaan dhowr jeer la kulanay Dabageed iyo Waare waxayna labadooduba naga diideyn xalkii aan wadnay iyo in tanaasul la sameeyo” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo katirsan xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle.
“Waxa la isku haayo waa arin fudud laakiin waxaa muuqda tanaasul la’aan iyo in sharciga loo hogaansamo” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Daqare oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Maxamed Bashiir Qaasim “Daqare” ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay soo farageliso muranka ka jira Gobalka Hiiraan oo lugaha la sii galay muddo 30 cesho ah. Daqare ayaa sheegay in Gobalka aysan ka socon shaqo dadkana ay qabaan walaac ku saabsan sida lagu xalin kara arinta ka taagan Beladweyne.
“DF-ka Soomaaliya waxaan ka dalbaneynaa in ay guddi u soo magacaawdo xaaladda siyaasadeed ee gobalka Hiiraan” ayuu yiri Maxamed Bashiir Qaasim. “Xildhibaano ka soo jeeda gobalka ayaa soo gaaray Beladweyne muddo 9 cesho ah ayey joogaan wax war ahna nagama siinin sida ay xaaladda tahay, arintaan waxay noo muujinee in ay ku guul dareesteen” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Guddigii Golaha Shacabka ee loo xilsaaray baaritaanka dadkii lagu laayay Gaalkacyo oo War-saxaafadeed soo saaray
Wasiirka Dastuurka oo sheegay in uu heer gabo-gaba ah marayo dhameestirka Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya